मेरो छ शब्द पुन: शुरू | Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 30, 2008 आइतबार, मे 29, 2016 Douglas Karr
GL Hoffman बाट यो पोष्टबाट प्रेरित, यो मेरो ब्लगको छ शब्द पुनः सुरु हो:
अथक जवाफ खोज्दै। र तिनीहरूलाई साझेदारी गर्दै।
टैग: gl hoffmanहॉफम्यानरिजुमछ शब्दछ शब्द पुनःसुरु
डिसेम्बर १, २०१ 30 2008:२:3 अपराह्न
जटिल समस्याहरू कुशलतापूर्वक र elegantly हल।
डिसेम्बर १, २०१ 30 2008:२:5 अपराह्न
खानको लागि काम गर्नुहोस्। बाँच्नको लागि सिर्जना गर्नुहोस्।
राम्रो एक डगलस!
साथै, तपाईका साथीहरू एन्ड्र्यू र रबी पनि। निश्चित गर्नुहोस् लिंकमा फिर्ता पोष्ट गर्नुहोस् http://www.whatwoulddadsay.com त्यसोभए हामी सबैले छवटा शब्द सुरू भएको देख्न सक्दछौं। धन्यवाद साथी हो।
डिसेम्बर १, २०१ 30 2008:२:6 अपराह्न
हेर्नुहोस् Douglas Karrको छ शब्द पुन: शुरूवात। 🙂
जनवरी 3, 2009 मा 9: 37 एएम
लीप! पोखरीमा पानी छ!
जनवरी 3, 2009 मा 9: 51 एएम
मैले एक पूर्व सहकर्मीलाई मेरो लागि सिफारिस लेख्न आग्रह गरें, र उनको पहिलो वाक्य थियो, "एमी सिक्नको लागि जीवित छ, र सिर्जना गर्न सिक्छ।" मैले यो प्रस्तावना टाईप गरें ताकि कसैले पनि सोच्दिन कि मैले एन्ड्रयूको अद्भुत छ शब्दहरू चोरी गरें =)
मेरो छ शब्द पुनःसुरु हुनेछ, "जान्नको लागि बाँच्दछ, सिर्जना गर्न सिक्छ।"
जनवरी 3, 2009 मा 11: 38 एएम
मैले असम्भवलाई तुच्छ ठान्छु